Zimbabwe start to engage in international forums
Zimbabwe start to engage in international forums
Zimbabwe had fractured relations with the West and became increasingly isolated under Mugabe, who held power since independence from Britain in 1980
16 April 2018 Monday 19:46
ZIMBABWE will attend a Commonwealth summit this week in London as an observer, an official said Monday, underlining the country's international re-engagement since President Robert Mugabe's fall.
Foreign affairs secretary Joey Bimha told AFP that Zimbabwe would be represented by Foreign Minister Sibusiso Moyo at the two-day heads of state meeting in London starting on Thursday.
Bimha said Zimbabwe's attendance reflected President Emmerson Mnangagwa's intention to improve international relations and boost foreign investment in the post-Mugabe era.
Zimbabwe left the Commonwealth at the height of land seizures, when white farmers were evicted in favour of landless black people in a policy that wrecked the agriculture sector and triggered national economic collapse.
Mugabe regularly said "to hell with the Commonwealth" - a bloc of former British colonies - and launched bitter verbal assaults against Zimbabwe's former colonial ruler.
Mnangagwa, Mugabe's former deputy and a hardline loyalist in the ruling Zanu-PF party, came to power in November after a brief military intervention. AFP
Zimbabwean Mnangagwa, China’s Xi Jinping on 'belt and road initiative'
President Mnangagwa visits to Beijing crucial for China -Zimbabwe relationship
Zimbabwe President Mnangagwa life after Robert Mugabe’s era
Zimbabwean rights group urges government to break impasse with striking doctors
Mnangagwa says US misinformed about situation in Zimbabwe